Barattoota Yuun. Jigjigaa: ''Odaan waraqaa eenyummaa keenyarra jiru dararaaf nu saaxile'' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright FACEBOOK/JIGJIGA UNIVERSITY
Goodayyaa suuraa Barsiisonni Oromoo 60 ol ta'an Yunivarsitichatti hin deebinu jechaa jiru
Walitti bu'iinsi naannolee daangaa Oromiyaa fi Somaalee gidduutti uumame, jiruufi jireenya hawaasa kumaatamaan lakka'amanii jeeqeera.
Sababuma kanaanis yoo xinnaate namoonni 40 lubbuu yommuu dhaban, kanneen kuma 50 ol lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanirraa akka buqqaafaman taasiseera.
Walitti bu'insi kun kanumaan osoo hin dhaabatiin haala baruufi barsiisuu irrattillee dhiibbaa uumaa jira.
Jalqaba ji'a Fulbaanaa irraa eegalee sodaarraan kan ka'e, barsiisonni Yuunivarsiitichaa, keessattuu kan Oromoo ta'an baqatanii gara biyya irraa dhufanitti deebi'aniiru.
Barattoonnis sodaa dararamuurraa kan ka'e, bara barnootaa kanaaf deebi'anii barachuu sodaatanii akka jiran barsiisotni fi barattootni dubbifne nutti himaniiru.
'Baqannee baane' - barsiisota
Barsiisaan maqaansaa akka eeramuu hin barbaanne tokko BBC'f akka himetti, barsiisonni Oromoo Yunivarsiitii Jigjigaa keessa barsiisan humna liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin rakkoon hedduu akka isaan irra gahaa jiru ibsa.
''A.L.I Fulbaana 05, 2010tti, barsiisonni iddoo turre gadi dhiisnee akka baanu erga godhanii booda, rooba cimaa ture keessa daa'imman walin dhoqqee irra nu teessisan.
Mobaayilas nu harkaa guuranii mana hidhaatti nu geessuuf bakka yaalaa turanitti, bulchiinsi Yuunivarsiitichaa qaqqabee nu oolcheera.'' jedha.
Kun ennaa ta'u miseensonni poolisii federaalaa fi raayyaan biyyaa akka ilaalanii, callisan dabalee BBCtti himeera.
''Kana booda namuu karaa argateen baqatee gara biyyaa gale.'' jedha barsiisaan kun.
Kana boodas gara sanatti deebi'uun hojjechuu akka hin dandeenyeefi yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiranitti akka jijjiiraman gaafatan.
Bakka bu'oonni barsiisotaa 'marii' Ministeera Barnootaa waliin taasisaniin, ''Biyyattiin sirna Federaalizimiitiin bulti. Yoo rakkoon hangam fedhe jiraatellee, barsiisaa bakka tokko irraa bakka biraattii jijjiiruun hin danda'amu. Kun taanaan sirnichi ifumaan ifatti diigamuu isaati,'' jedhamuu isaaniis nutti himaniiru.
''Mooraa keessaa yogguu baanu, waraqaa eenyummaa nu gaafatu. Nutis kan Yuunivarsiitiin nuu kennee yommuu itti kenninu, 'kana miti isa gandaa fidaa' jedhu."
"Kan gandaa kennineefii yoo Odaa irratti argan, reebichaa fi dararaa adda addaa nurraan gahu.'' jedha yuunivarsiitichatti barataa waggaa sadaffaa kan ta'e Oliiqaan (maqaansaa kan jijjiirame).
Kan qofaas miti jedha barataan kun, ''sababoota hinjirre garagaraatiin bahaafi gala nu dhorkun, hiraara nu agarsiisu.'' Sababoota kanneen keessaas, 'bilbila keerratti alaabaan ABO argameera.'' kan jedhu isa tokko akka ta'es nutti himeera.
Barattoonni mana hidhaa keessa ji'a lamaafi isaa ol turanii bahan akka jiranis nutti himeera Oliiqaan.
Akka Oliiqaan nutti himeefi fuula feesbuukii 'Barattoota Oromoo Yuunivarsiti Jijjiga' jeedhurraa arganetti, lakkoofsi barattoota kanneenii kuma 4 ol kan ta'u dha.
'Amma booda achi deebinee barachuu hin dandeenyu,
Yuniivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran keessatti nu ramadaa.' kan jedhu dha.
Goodayyaa suuraa Xalayaa barattoota Oromoo Yuniivarsiitii Jigjigaa gariin
Haalli naannoo Somaalee Itoophiyaa keessa jiru tasgabbaa'uu kan hime Ministeerri barnootaa, barsiisonni hin deemnu waan jedhaniif qofa bakka biraatti hin ramadaman jedheera.
"Ammatti wanti to'annoo mootummaan ala ta'ee hin jiru, namootni kanaan dura yakka dalagan seeratti akka dhiyaatan hojiin qulqulleessu hojjetamaa jira," jedhan Dayireektarri Komunikeeshinii Ministeera Barnootaa aadde Haraguwaa Maammoo.
"Naannoon buluu jechuu kophaatti odola uumanii jiraachuu miti, kanaaf waa'ee federaaliizimii uummatni akka baruu fi akka hubatu cimsinee hojjennas," jedhaniiru.